Nhau - Top 10 Mashandisiro eTii Ausingazive
Iko kushandiswa kwetiyi kunonyanya kunge chinwiwa, chinova chakanakisa chinwiwa chine ese maviri mavara, hwema uye kuravira. Mashizha etii ayo akabikwa akakosha zvakare.
Zvimwe zvekushandisa izvi zvino zvaziviswa zvinotevera:
1. Birai mazai eti.
Vamwe vanoshandisa yakabikwa mashizha etii kuvira, uye vamwe vanoshandisa tii poda. Yakanakisa kushandisa nhema tii. Yakajairwa nhema tii yakachipa, uye iwo akabikwa tii mashizha ane rosy mazai evha uye inonaka kuravira. Kiyi yemazai yeti yakabikwa kufashaira mazai kutanga, kutyora makanda emazai zvishoma, wozoisa mashizha eti mumvura uye woramba uchiabika kuti itai inonaka.
2. Kugadzira mapiro eti.
Usarase mashandisiro etii mashizha, uwaridze pabhodhi rehuni woomesa, woaunganidza, ayo anogona kushandiswa sembiru mapiro. Zvinonzi nekuti tii inotonhorera muchisikigo, mapiro yetiyi anogona kuzorodza pfungwa nekuvandudza kugona kwekufunga.
3. Dzorera umhutu.
Kuomesa mashizha tii anoshandiswa nekuaabatidza kwadoka muzhizha kunogona kudzinga umhutu. Iyo ine maitiro akafanana neaya mosquito coils uye haina zvachose kukuvadza kumuviri wemunhu.
4. Batsira kusimudzira uye kubereka kwemaruva nemiti.
Mashizha etii akabikwa achiri nemanyuturu akadai seanogadzirwa nemunyu uye makabhohaidhiretsi, ayo anogona kubatsira kukura uye kubereka kwemaruva nemirimi kana akaunganidzwa mubhedha kana muhari.
5. Kuzvara uye kurapwa kwetsoka yemumhanyi.
Iyo tii ine huwandu hwakawanda hwetanini, iyo ine yakasimba bactericidal athari, uye inonyanya kushanda kune iyo filamentous bacteria inokonzeresa tsoka yemumhanyi. Naizvozvo, vanhu vane chirwere chebheriberi, virai tii muto gobvu manheru ega ega kuti vageze tsoka, uye inopora nekufamba kwenguva. Nekudaro, zvakafanira kushingirira mukugadzira tii yekushambidza tsoka dzako, uye hazvizove nemhedzisiro yakakosha munguva pfupi. Uye zvakanakisa kushandisa green tii, yakaviriswa tii tii, zvemukati zvemananini zvakanyanya kushoma.
6. Bvisa mweya wakaipa.
Tea ine yakasimba astringent mhedzisiro. Kana iwe ukachengeta tii mashizha mumuromo mako nguva nenguva, unogona kubvisa mweya wakaipa. Kushandisa yakasimba tii kugadzirira kazhinji kune zvakafanana maitiro. Kana usiri kugona kunwa tii, unogona kunyudza iyoi wozoibata mumuromo mako kuti uderedze kuravira kunovava uye uve nemhedzisiro.
7. Unogona kutarisira bvudzi rako.
Mvura yetii inogona kubvisa tsvina nekukora, saka mushure mekugeza bvudzi rako, geza nemvura yetii kuti bvudzi rako rive dema, rakapfava uye rinopenya. Zvakare, iyo tii haina makemikari vamiririri uye haizokuvadze bvudzi neganda.
8. Geza mbatya dzesilika.
Hembe dzesilika dzinotya kwazvo makemikari sipo. Kana iwo akanyoroveswa tii mashizha akashandiswa kufashaira mvura kugeza iyo sirika mbatya, iyo yekutanga vara uye kubwinya kwembatya dzinogona kuchengetwa dzakapenya senge nyowani. Kuwacha mbatya dzakagadzirwa neshinda dzenylon zvine maitiro akafanana.
9. Pukuta mashizha eiii anoshandiswa pamirazi, magonhi egirazi nemahwindo, fenicha, tepi yekunamira, shangu dzematehwe dzine matope, uye hembe dzakasviba.
10. Pane hwema hwehove mumidziyo.
Isa tsvina tii mashizha mairi uye bika kwemaminetsi mashoma kuti ubvise hwema hwehove. Muchokwadi, iko kushandiswa kwetii kwakanyanya kupfuura izvi, sekureba sekunge painonzwa kunge yakakodzera, inogona kushandiswa semarara. Ndinovimba mhinduro iyi haizokuregerere pasi!
Dzidza zvakawanda nezve tii
Dzidza Zvimwe Ruzivo
Dzidza zvakawanda nezve kambani
Kune hutano hwemunhu, isu tinogara tichikurudzira hupenyu hwehupenyu mafungire, uye tinozvipira kuve mutsigiri uye mutungamiri wenyuchi tii.
NGATITAI KUTI TITAURE NEZVENYU ZVEProjekti！
Post nguva: Sep-23-2021